‘मन बिनाको धन ठुलो’ गाउन अशोकलाई नेपालमै छोडेर जापान उड्ने भए टंक बुढाथोकी, आखि किन ? « OsNepal News
‘मन बिनाको धन ठुलो’ गाउन अशोकलाई नेपालमै छोडेर जापान उड्ने भए टंक बुढाथोकी, आखि किन ?
जापानमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन टंक बुढाथोकी अशोक दर्जी बिनै जाने भएका छन् । सधैँ बाल गायक अशोक दर्जीलाई लिएर देश तथा विदेश जाने गरेका टंक यसपाली भने एक्लै जाने भएका हुन् । उनी नेपाल तामाङ कलाकार संघले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन जापान जानेछन् ।
आयोजक संस्थाका अध्यक्ष अध्यक्ष टासी लामाका अनुसार कार्यक्रममा मन बिनाको धन ठुलोकी धन बिनाको मन भन्ने गीत गाएर चर्चित बनेका गायक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकी, साउथ एसियन स्टार गायक तथा संगीतकार आशुशेन लामा लगायत अन्य स्थानीय कलाकारले आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने छन् ।
नेपाल तामाङ कलाकार संघले जापानमा नमस्ते साँझ २०१८ कार्यक्रम गर्न लागेको छ । यहि सेप्टेम्बर ३० मा मेगुरो कुमिन सेन्टर टोक्यो लगायत जापानका विभिन्न शहरहरूमा हुन लागेको हो । यस सांस्कृतिक कार्यक्रममा जापानमा रहने सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन पनि नेपाल तामाङ कलाकार संघले आग्रह गरेका छन् ।
माला र रम्बो अभिनीत आँखामा बोलको गीत सार्वजनिक
माला लिम्बु र रम्बो अधिकारी अभिनीत आँखामा बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका